ဆံ ပင် အ ရှည် ကို စွဲ လန်း သူ – Hlataw.com
အ ပိုင်း(၁) ထွန်းခင်သည်ငယ်ငယ်ကတည်း ကဆံပင်ကိုစွဲလန်းစိတ်ရှိသူတယောက်ဖြစ်သည်. ဘယ်လောက်တောင်စွဲလန်းလည်း ဆိုရင် အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ ​ခေါင်းလျှော်​ရေချိုးနေတာ တွေ့ရင်သူ့မှာ ဆံပင်ရှည်တွေကို ခိုးခိုးကြည့်​ပြီး စိတ်မှန်းဖြင့် ဂွင်းထုရတာကို နှစ်သက်နေမိကာ ကြာလာတော့အားမရတော့ဘူး ဖြစ်နေတော့သည်. ထိုအခါအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည် မိန်းကလေးတွေ အိမ်ကိုအလည်သွားပီး သူတို့ဆံပင်အကျွက်တွေကို သူတို့မသိအောင်လိုက်ရှာယူပြီး အိမ်ရောက်ရင်ဆံပင်ရှည်အကျွတ်တွေကို နမ်းပီးဂွင်းထု ရတာပိုကြိုက်လာတယ်. အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ ဆံပင်ရှည်မိန်းကလေးကိုလည်း အမြဲစားဖို့ ချောင်းနေတော့လေသည်. ဒါနဲ့ထွန်းခင်က တက်စီ ကားမောင်းတာလေ မိဘတွေ မရှိကြတော့ဘူး. တစ်ကိုယ်တည်း လူပျိုကြီးလည်းဖြစ်သည်. ထွန်းခင်ကားကို ဆံပင်အရှည်ကြီးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ ငှားစီးတဲ့နေ့များဆိုရင် ထွန်းခင်စိတ်ရိုင်းတွေဝင်​လာပြီး တနေရာရာ ကိုခေါ်သွာပြီး ဆံပင်အရှည်ကြီးကို စိတ်ထဲရှိတာ လုပ်ပစ်လိုက်ချင်​တော့တယ်.
ဒါပေ​မဲ့ ခက်တာက ထွန်းခင်မှာနေ​ရာမရှိဘူးလေ. အဲ့တော့ ထွန်းခင်ဘဝက ဆံပင်ရှည်အကျွတ်တွေ ရှာလိုက်ဂွင်းထုလိုက်နဲ့ပဲ စိတ်ဖြေနေရတော့သည်. ဒီလိုနဲ့ တနေ့ကြတော့ ထွန်းခင်ကိုလူတယောက်လာရှာတယ်. “ဟေ့. ထွန်းခင်ရေ…..” အိမ်ရှေ့ကနေ ရပ်ကွက်လူကြီးဦးအေမောင်ခေါ်တာနဲ့ “ဗျာ….ဦးလေးအေးမောင်. အေးဒီမှာ မင်းကိုရှေနေ့ တယောက်လာရှာလို့ လိုက်ပို့တာ…”ဟုပြောပြီး လူတယောက်ခေါ်လာလေသည်. “အော်….ဒီကဦးလေးက ကျွန်တော့ကို ဘာဖြစ်လို့ လိုက်ရှာတာလည်းမသိဘူး”ဟုထွန်းခင်က အိမ်တံခါးဖွင့်ရင်းမေးမြန်းလိုက်သည်. “ဒီလိုပါငါ့တူ…. မင်း ဦးဝင်းဇော်ကိုသိလား”ဟု တိုက်ပုံအမည်းရောင်နှင့်လူကမေးလိုက်သောအလာ ထွန်းခင်တချက် စဉ်းစားလိုက်ပြီး “​သိတယ်လေ ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ ညီလေ.ဦးလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ. ကျနော်နဲ့တောင် မတွေ့တာအတော်ပြီ”်”အေး ဟုတ်တယ်. သူဆုံးသွားတာတနှစ်လောက်ရှိ​ပြီ. သူ မကွယ်လွန်ခင် မင်းကိုရှာခိုင်းပြီး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ဘဏ်မှာအပ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံသိန်းတစ်ရာကို မင်းကိုပေးပါလို့ ဦးကိုမှာခဲ့တယ်. မင်းအရင်နေခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သွားရှာတာ မင်းပြောင်းသွား​ပြီတဲ့. အခုတောင် ဒီနေရာကို တော်တော်ရှာလိုက်ရတယ်.
ကဲ….ဒါက အိမ်စာချုပ်၊ဒါကဘဏ်စာအုပ်”ဟုထွန်းခင်အား ကမ်းပေးလိုက်သည်. ထိုရှေ့နေ့မှဆက်၍ “အိမ်ကတော့ မှော်ဘီမြို့ အစွန်မှာနေချင်လည်းနေ မနေချင်ဘူး ဆိုလည်းပြန်ရောင်းလိုက်ပေါ့ကွာ” ဟုဆက်ပြောလေသည်. ထိုနောက် “မင်းဒီနေ့အားရင် ဦးလေးလိုက်ပြမယ်”ဟုပြောလေသည်. ထွန်းခင်မှ “အားတယ်ဦးလေးသွားကြမယ်”ဆိုပြီးအားရဝမ်းသာပြောလိုက်တော့သည်. ထွန်းခင်ဘဝတော့ နေ့ချင်းညချင်းကို ပြောင်းလဲသွားလို့ မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေ​တော့တယ်….. မှော်ဘီကအိမ်ကိုရောက်တော့ ထွန်းခင်အရမ်းပျော်သွားတယ်. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ထွန်းခင်အရမ်းလိုချင်တဲ့ အိမ်မျိုးဖြစ်နေလို့ပဲ. အိမ်ကနှစ်ထပ်တိုက်အကျယ်ကြီးဖြစ်သည့်အပြင် ဘေးမှာလည်း ဘာအိမ်မှာမရှိဘူး အေးအေးချမ်းချမ်း တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရှိလှသည်. ထွန်းခင်အရမ်းကြိုက်သွားကာ ငေးမောနေစဉ် ” ကဲ ငါ့တူ ဘယ်လိုလဲ မောင်ထွန်းခင်ပြန်ရောင်းမှာ လာနေမှာလား”ဟုရှေ့နေက မေးလိုက်သည်. ထွန်းခင်လည်း “ပြန်တော့မရောင်းပါဘူး.ဦးလေးပေးထားတဲ့ အမွေလည်းဖြစ် ကျွန်တော်လည်း အိမ်ငှားနေရတာဆိုတော့ ဒီမှာပဲလာနေမှာပါ”ဟု ပြုံးရင်း ပြန်ပြောလိုက်သည်.